Dhakhtar dhaleecaynaya qiimeeynta caruuraha kelinimada ku yimid - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhakhtar dhaleecaynaya qiimeeynta caruuraha kelinimada ku yimid
La daabacay onsdag 18 maj 2016 kl 15.00
Håkan Mörnstrand: "Lama cadeeyn karo in u habkani ka fiicanyahay kii hore"
sawir: Claudio Bresciani/TT
Habka cusub ay dawladuu ku qiimeeyso da´da caruuraha kelinimada waddanka ku timaada ayey dhowr dhaktaro dhaleecayeen.
Kuwaan ayaa warqad u qoray wasiirka socdaalka ee Morgan Johansson halkey ka cabanayaan habka cusub.
Håkan Mörnstrand ayaa ah dhakhtar ku takhasuusay qiimeeynta da´da, waxaa af iswiidhiska lugu yidhaahdo ”Rättsodontolog”, kana mid ah dhakhtarada qoraalka u diray Johansson.
-Wax cadeeyn ah oo sheegaya in u habkani ka wanaagsanyahay kii hore ayaan jirin, ayuu sheegay.
Wuxuu waagi u dhakhtarka ahaa soo maray boqolaal baadhitaan halka u qiimeeyay da´da caruuraha kelinimada waddanka ku yimid. Wuxuu hubaa in ay ugu yaraan qaadanayso sannad inta ay dhakhtaradu habka cusub la qabsan doonan, halka da´da caruurahan laga qiimeeynayo sawir laga qaaday jilibkooda iyo isgooysga cagta, af iswiidhish ”fotled”.
Håkan Mörstrand ayaa ka mid ah shanta dhakhtar ee habka cusub dhaleecaynaya. Wuxuu u jeeda in qaabkan cusub oo la bilaabay in wadamadda qaar laga isticmaalo, la cedeeyn karin in u kii hore ka fiicanyahay.
Fikirkan ayaanu Carl- Erik Flodmark oo ah dhakhtarka caruurta la qeeybsaneeyn Mörnstrand. Flodmark ayaa ahaa shakhsigii ka dambeeyay in ay heeyadu caafimaadku soo jeediso hindisahan.
-Mushkulada ugu weyn ayaa ah in u habkii hore oo ilkaha caruurahan la baadhi jiray tayo haysanin. Macquul maaha in aad ilkaha keliya eegtid, dabeetana qiimeeysid in u qofku gaadhay 18 jir, ayuu sheegay.
Habka cusub ayaa hadii ay dawladdu fasaxdo la dhabeeyn kara biloowga sannadka dambe, 2017.